Liverpool Oo Ka Warbixisay Xaalada Henderson, Gomez & Matip | Somalia News
Kabtanka Liverpool ee Jordan Henderson ayaa ka maqnaan doona kulanka ay Reds la ciyaari doonto kooxda Lincoln City kulan ka tirsan tartanka Carabao Cup.
Jordan Henderson ayaa xanuun muruqa ah dareemay kulankii ay Liverpool guusha ka gaadhay kooxda chelsea kulan ka tirsanaa horyaalka premier League.
Sidoo kale xiddigaha Joe Gomez & Joel Matip ayaa ka maqnaan doona kulanka Ay Reds la ciyaari doonto kooxda Lincoln City wareega 3-aad ee tartanka Carabao cup-ka.
Caawiyaha Jurgen Klopp ee Pepijn Lijnders oo la hadlaya saxaafada ka hor kulanka Lincoln City ayaa yidhi”Kulanku waa mid aad ugu dhaw Joe-na taam uma noqon doono laakiin waxa uu tababarka ku soo laaban doonaa jimcaha waana war fiican”.
“Joel waxa uu dhankiisa ku soo laaban doonaa kadib fasaxa xulalka waxana uu u baahanyahay wakhti uu ku soo kabsado”.
“Hendo, waxa aan rajaynaya in uu tababarka ku soo laabto todobaadka dambe laakiin kulanka bari waa mid aad u dhaw laakiin waxa uu soo laaban doonaa kulanka Arsenal”.
Previous articleSoomaaliya waxay yeelatay Raysal wasaare cusub
Next articleSomali parliament endorses new prime minister – Anadolu Agency